Isi obodo Laos nabatara China Weekism na Culture Culture
Home » Akụkọ Mgbasa Ozi Omenala » Isi obodo Laos nabatara China Weekism na Culture Culture
Ememe izu ụka nke njem nlegharị anya na ọdịnala nke China, otu n'ime ọrụ dị mkpa nke leta Laos-China Afọ 2019, malitere na Lao isi obodo Vientiane na Fraịde.
N'ime mmemme a, nke ga-adịgide ruo Sọnde, ndị ọkachamara n'ihe nkiri njem site na Mpaghara Sichuan nke China ga-enwe okwu ihu ọha maka mmepe ụlọ ọrụ na omenala ndị njem.
Ndị na-eme ihe nkiri sitere na Sichuan na-eweta agba egwu nke oge a, Sichuan Opera na-agbanwe ihu ya, emume teapot ogologo na ihe ngosi nka ndị ọzọ nwere ekpomeekpo ọhụụ na ọdịnala Sichuan ndị Lao.
Ihe omume a ga-egosipụtakwa ahụmịhe ọdịbendị dịgasị iche iche, ọrụ mmekọrịta, ihe ngosi foto nke akpọrọ "China mara mma" yana ngosipụta nke ebe Sichuan.
Na mmemme mmeghe, ndị Sichuan Modern Dance Troupe gosipụtara usoro ịgba egwu ọgbara ọhụụ Gen (Root), nke sitere na Sanxingdui Ruins sitere n'ike mmụọ nsọ, kwenyere na ọ bụ foduru nke Shu Shu nke furu efu n'okpuru ọnọdụ dị omimi ihe dị ka afọ 3,000 gara aga, na-enye ndị na-ege ntị ọhụụ.
Na Satọde na Sọnde, n'oge ngwụsị izu nke Childrenbọchị Childrenmụaka Mba Nile, ihe omume a ga-enye ụmụaka ọrụ dịka ịgba egwu ọgbara ọhụrụ, Sichuan Opera Face Changing na ogologo oge teapot teapot, Face Painting, Motion Sensing Games, 3D foto mgbidi na mmekọrịta panda ejiji.
Weeklọ Ọrụ Omenala ndị China na Laos na Ngalaba Omenala na Njem Nleta nke Sichuan chịkọtara izu a na-eme njem nlegharị anya na omenaala.
Emume nnabata nke Fraịde bụ onye nnọchi anya China na Laos Jiang Zaidong, Lao Minister of Information, Culture and Tourism Bosengkham Vongdara, yana ihe karịrị mmadụ 300 sitere na mpaghara niile na Laos.
Onye nwụrụ na Maui na ọdọ mmiri asaa a ma ama
FAA maliteghachirịrị na Mmemme Towerlọ Ọrụ Nkwekorita
15 awa gara aga